ဖွံ့ဖွံ့ထားထားပဲ ကြိုက်တယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဖွေးဖွေး | Buzzy
ဖွံ့ဖွံ့ထားထားပဲ ကြိုက်တယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဖွေးဖွေး
သူမကို ဝေဖန်သူတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ ၊ ပြောသွားတာ ချစ်စရာလေး
သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးတစ်ယောက် ဒီရက်ထဲ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ သူမရဲ. ခန္တာကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်နေကြသူတွေကို အခုလို ပြောဆိုသွားပါတယ် ။ 'သူများတွေ ပိန်ပိန်သေးသေးလေးတွေတော့ လှပါတယ်။ ဖွေးက မြန်မာမင်းသမီးတွေလိုမျိုး ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားပဲ ကြိုက်တယ်' လို့ Myanmar Celebrity နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
သရုပျဆောငျ ဖှေးဖှေးတဈယောကျ ဒီရကျထဲ လူမှုကှနျယကျတှမှော သူမရဲ. ခန်တာကိုယျနဲ့ ပတျသတျပွီး ဝဖေနျနကွေသူတှကေို အခုလို ပွောဆိုသှားပါတယျ ။ 'သူမြားတှေ ပိနျပိနျသေးသေးလေးတှတေော့ လှပါတယျ။ ဖှေးက မွနျမာမငျးသမီးတှလေိုမြိုး ဖှံ့ဖှံ့ထှားထှားပဲ ကွိုကျတယျ' လို့ Myanmar Celebrity နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
သူမဟာ အခုလို ခန္တာကိုယ်မျိုး ဖြစ်လာတာ သူမရဲ. personal trainer က ထွက်သွားလို့ gym မသွားဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆိုသွားပါတယ်။
သူမဟာ အခုလို ခန်တာကိုယျမြိုး ဖွဈလာတာ သူမရဲ. personal trainer က ထှကျသှားလို့ gym မသှားဖွဈကွောငျးလညျး ဆိုသှားပါတယျ။